Wasaradda Howlaha Guud iyo Dib-udhiska oo Wasaaradda Maaliyadda ku wareejisay Maamulka Dakhliga ay soo uruuriso – Radio Muqdisho
La wareegitaanka maamulka maaliyadeed ee wasaaradda howlaha guud oo lagu wareejiyay wasaaradda maaliyadda ayaa ka dambeysay markii ay kulan wadatashi ah yeesheen mas’uuliyiinta labad wasaaradood.
Kusimaha Wasiirka Maaliyadda ahna Wasiiru Dowlaha Mudane Maxamuud Xayir Ibraahim, Wasiir ku xigeenka Maaliyadda Mudane Cabdullahi Sheekh Cali (Prof Qaloocoow) ayaa kulan la qaatay masuuliyiinta Wasaaradda Howlaha guud iyo Dib udhiska Xukuumadda Soomaaliya iyadoona ka wada hadalay la wareegista Wasaaradda Maaliyadda ay la soo wareegtay maamulka Dakhliga ay soo uruusiso Wasaaradda Howlaha Guud,tasoo si toos ah ugu dhici doonta Bangiga dhexe ee Dowladda.
Wasaaradda Maaliyadda XFS ayaa maamuleysa dhamaan Hey’adaha Dowladda ee Dakhliga sida gaar ka ah u soo xareeya.
Arrinkaan waxa uu daba socda Go’aankii ka soo baxay Shirkii ay wada qaateen R/wasaaraha Soomaaliya Mudane Xassan Cali Kheyre iyo Wasaaradaha iyo Hey’adaha Dowladda ee Dakhliga uruuriya, go’aankaasoo ahaa in dhamaan wixii Dakhli ah ay maamusho wasaaradda Maaliyadda.
Ururka Iskaashatooyinka Beeraleyda qaranka oo doortay guddoomiye cusub